Manjaro 0.8.5 misy | Avy amin'ny Linux
Manjaro 0.8.5 misy
Taorian'ny herinandro maromaro nivoatra mafy dia navoaka ny kinova 0.8.5, izay misy fanatsarana lehibe maromaro.
Ny fanovana lehibe indrindra raha oharina amin'ny kinova taloha:
Fametrahana sary vaovao
Ivon-toerana Manjaro vaovao
Ny mpitantana fonosana Pamac dia navaozina tanteraka
LXDM / Slim ho mpitantana fampisehoana
Fanohanana mpamily fananana amin'ny karatra sary AMD sy Nvidia
Fanohanana haino aman-jery fanampiny (Qupzilla, Pamac, VLC, ary XNoise), fampiharana bebe kokoa ary fidirana AUR amin'ny toerana misy anao.
Ho fampahalalana bebe kokoa, soso-kevitra ny hamaky ny naoty famoahana hita ao amin'ny bilaogy Manjaro.
Ampidino ny Manjaro 0.8.5
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Manjaro 0.8.5 misy
Ariel chiaramello dia hoy izy:
Manana ny kinova teo aloha aho (fa tsy tadidiko ny isa) napetraka ao amin'ny fanamarihako… ilaina ve ny mametraka an'ity kinova ity na amin'ny fanavaozana ny rafitra ankehitriny, mety efa hanana ireo fiasa vaovao ve izany? - Misaotra anao
Valiny tamin'i Ariel Chiaramello
Marina indrindra, somary tsara kokoa ho an'ny mpampiasa noho ny Arch satria tsy maika ny hiova izany.
guerrilla7 dia hoy izy:
Izy io dia manana trano fitahirizana misy anarana samihafa, saingy misy fonosana mitovy amin'ny Repository Arch, tohana tanteraka izy ireo
Mamaly an'i guerrilla7
Tsy ilaina izany fa Rolling Release
Hanova OS dia hoy izy:
Mizara repositories amin'i Arch ve ity distro sa mitranga toy ny amin'ny chakra?
Valio ny Switch OS
Misintona Android Line